Condor Airlines Inotangazve Kubhururuka kwayo kuParadise Islands yeSeychelles
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Condor Airlines Inotangazve Kubhururuka kwayo kuParadise Islands yeSeychelles
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Condor Airlines adzoka muSychelles
Ndege yaCondor Airline Boeing 767/300 yakabata kuSeychelles International Airport muna 0620 mangwanani emugovera Mugovera, Gumiguru 2, 2021, uko kudzoka kwayo kuzvitsuwa zveparadhiso kwakakwaziswa nesaruta yemvura.
Kubhururuka kwekutanga kwaCondor kwemwaka kuenda kuzvitsuwa zveSeychelles kwakatakura vafambi 164.
Vafambi mumwe nemumwe akagashira sechikamu cheshoko rinodziya vanogamuchira chiyeuchidzo kubva kuDhipatimendi reKushanya uye vakavaraidzwa nemimhanzi yechinyakare yemimhanzi.
Musika weGerman ndeimwe yeakanakisa anoita sosi misika yeSychelles.
Kutangazve yayo isingamisi ndege kubva kuFrankfurt, ndege yekutanga yaCondor yemwaka kusvika Secheres vakatakura vafambi 164 avo vakagashira sechikamu checreole inodziya vanogamuchira chiyeuchidzo kubva kuDhipatimendi Rezvekushanya uye vakavaraidzwa nemimhanzi yechinyakare yemimhanzi.
Ipo kuuya kwekuuya kwendege uye kukwazisa vafambi gumi nematanhatu pavanoburuka, Director weDhipatimendi reKushanya kuDesign Marketing, Mai Bernadette Willemin, vakati nekutanga kwemasevhisi, Condor inobatana nedzimwe ndege dziri kubatsira kupora kweindasitiri yekushanya uye hupfumi hwezviwi.
“Nekutangazve kwemasevhisi ayo, Condor ajoina dzimwe ndege gumi nembiri. Izvi zvinotipa mufaro mukuru kuona mumwe mukomana wendege akadzoka pamahombekombe edu. Kubhururuka kwakananga kubva kuguta reEurope kunogara kuri kuwedzera kukosha kwenzvimbo yauri kuenda. Ichi chi danho rakakura mukupora kwedu kunyanya sezvo musika weGerman uri mumwe weakanakisa anoita sosi misika yeSychelles. Kudzoka kwendege kunouya panguva chaiyo uye hurumende yeGerman inorerutsa zvinodiwa pakufamba kune zvizvarwa zveGerman nevagari vanofamba kuenda kuSeychelles, "Mai Willemin vakadaro.
VaRalf Teckentrup, Chief Executive Officer weCondor, vachiratidza kuvimba kwavo nekwavaienda, vakati, "Seychelles iri muIndian Ocean ndeyendege reCondor uye inzvimbo inozivikanwa nevashanyi vedu. Chitsuwa ichi chinonakidzwa nemabhichi akasarudzika, matombo ekorari uye masango emvura uye isu tiri kutarisira zvikuru kubhururuka vashanyi vedu pazororo mushure menguva yakareba yakadaro yekudzungaira. "Tave tichishanda zvinobudirira nevekushanyirwa Seychelles kwenguva yakareba kuti vashanyi vedu vafarire zororo ravo reroto."
Tourism Seychelles ichave ichishanda pamwe nendege, vanobatirana indasitiri yekufambisa, vezvenhau uye zvakare kuwedzera mushandirapamwe wevatengi wekuhwina vashanyi kubva kumisika yayo yakakosha. “Kushanda nesimba kwedu kwakanangana nekudzosa vashanyi vedu kubva kuGerman nenyika dzakavakidzana. Nekuuya kweCondor, tiri kutarisira kutarisira kuwedzerwa kwenhamba dzevanosvika, ”vakadaro Mai Willemin.
Germany ndiyo yaitungamira musika weSychelles mu2019, apo kwaienda kwakanyora vashanyi 72,509 8,080 vakasvika kubva kuGerman, vangangoita kota yavo vakafamba paCondor. 2021 vashanyi vakashanyira Seychelles mumwedzi mipfumbamwe yekutanga yaXNUMX.